ညို့အားပြင်း တဲ့ ဟန်ပန်လေး တွေ နဲ့ ဆွဲဆောင် မှု ရှိလွန်း တဲ့ M ဆိုင်းလု ရဲ့ အမိုက်စား TIK TOK ဗီဒီယိုဖိုင်လေး – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ညို့အားပြင်း တဲ့ ဟန်ပန်လေး တွေ နဲ့ ဆွဲဆောင် မှု ရှိလွန်း တဲ့ M ဆိုင်းလု ရဲ့ အမိုက်စား TIK TOK ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
ညို့အားပြင်း တဲ့ ဟန်ပန်လေး တွေ နဲ့ ဆွဲဆောင် မှု ရှိလွန်း တဲ့ M ဆိုင်းလု ရဲ့ အမိုက်စား TIK TOK ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
By Ga MonePosted on February 6, 2021 February 6, 2021
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အနုပညာေ လာက မှာ ပုရိသပရိသ တ်တွေရဲ့ အသည်းတွေ ကို ဖမ်းစားထားနိုင်ပြီး အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကြောင့် အားလုံးက သဘောကျအချစ်ပိုနေရသူလေးကတော့ မော် လ်ဒယ် Mဆိုင်းလု ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ အောင်မြင်မှုတွေ အခိုင်အမာနဲ့ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခု အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ M ဆိုင်းလုကတော့ ညို့အား ပြင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အ လှ တရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါပဲ..။
နာမည်ကျော် စူပါမော်လ်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်လျှောက် လှမ်းနေတဲ့ သူမကတော့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတွေလည်း မကြာခဏ ဆော့ကစားပြီးတော့လည်း ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစား ထား သူလေးပါ..။အခုတစ်ခါမှာလည်း Mဆိုင်းလုတစ်ယောက် အမိုက်စားလေး ကပြဆော့ကစားထားတဲ့ သူမရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်း ဝေမျှလာ ပါတယ်နော်..။
ကချင်တိုင်းရင်းသူလေးမို့ ချစ်စ ရာကောင်းတဲ့ စကားသံ ဝဲဝဲလေးကလည်း ပရိသတ်တွေကို အချစ်ပိုစေပြီး ညို့အားပြင်းတဲ့ ဟန်ပန်လေးတွေကလည်း တကယ်ကို ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းပါတယ်ေ နာ်. .။ကဲ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်ေ တွအတွက်လည်း ဒီကနေ့လေးမှာ မော်လ်ဒယ် M ဆိုင်းလုရဲ့ အမိုက်စား Tik Tok ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်း တင်ဆက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
ပရိသတ္ႀကီးေရ.. အႏုပညာေ လာက မွာ ပုရိသပရိသ တ္ေတြရဲ႕ အသည္းေတြ ကို ဖမ္းစားထားႏိုင္ၿပီး အမိုက္စားပုံရိပ္ေလးေတြေၾကာင့္ အားလုံးက သေဘာက်အခ်စ္ပိုေနရသူေလးကေတာ့ ေမာ္ လ္ဒယ္ Mဆိုင္းလု ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။ ေအာင္ျမင္မႈေတြ အခိုင္အမာနဲ႔ အႏုပညာေလာကမွာ ေနရာတစ္ခု အခိုင္အမာရရွိထားတဲ့ M ဆိုင္းလုကေတာ့ ညိဳ႕အား ျပင္းၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ အ လွ တရားေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူပါပဲ..။
နာမည္ေက်ာ္ စူပါေမာ္လ္ဒယ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေလွ်ာက္ လွမ္းေနတဲ့ သူမကေတာ့ Tik Tok ဗီဒီယိုေလးေတြလည္း မၾကာခဏ ေဆာ့ကစားၿပီးေတာ့လည္း ပရိသတ္ေတြကို ဖမ္းစား ထား သူေလးပါ..။အခုတစ္ခါမွာလည္း Mဆိုင္းလုတစ္ေယာက္ အမိုက္စားေလး ကျပေဆာ့ကစားထားတဲ့ သူမရဲ႕ Tik Tok ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကိုလည္း ေဝမွ်လာ ပါတယ္ေနာ္..။
ကခ်င္တိုင္းရင္းသူေလးမို႔ ခ်စ္စ ရာေကာင္းတဲ့ စကားသံ ဝဲဝဲေလးကလည္း ပရိသတ္ေတြကို အခ်စ္ပိုေစၿပီး ညိဳ႕အားျပင္းတဲ့ ဟန္ပန္ေလးေတြကလည္း တကယ္ကို ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလြန္းပါတယ္ေ နာ္. .။ကဲ ခ်စ္ရတဲ့ ပရိသတ္ေ တြအတြက္လည္း ဒီကေန႔ေလးမွာ ေမာ္လ္ဒယ္ M ဆိုင္းလုရဲ႕ အမိုက္စား Tik Tok ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကိုလည္း တင္ဆက္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္..။
Previous post ရင်ခုန်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ အလှ တရားတွေ နဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစား လိုက် ပြန် တဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ
Next post လူပြန်ကယ်ဌာန တခုလုံး အလုပ် မ ဆင်း တဲ့ ကိစ္စ နှင့် အခွင့်အ‌ရေးသမား